Kit အသစ်နှင့် အတူ 300 HP ကျော်လောက် အထိကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်သွားတဲ့ Toyota GR Yaris! – MyMedia Myanmar
Kit အသစ်နှင့် အတူ 300 HP ကျော်လောက် အထိကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်သွားတဲ့ Toyota GR Yaris!
စီးပွားဖြစ် ကားသေး အမျိူးအစားတွေကတော့ အမေရိကဈေးကွက် အတွင်းမှာ သိပ်ပြီး ရောင်းအား ကောင်းလေ့ မရှိတာကို တွေ့ရ လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း 2020 ခုနှစ်မှာ Toyota Yaris ကား အတွက်ကတော့ ဒီဈေးကွက်ထဲမှာ ရှင်သန်ရတဲ့ နောက် ဆုံးနှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလိုမျိုး အခြေအနေကတော့ အချို့ ချွေတာပြီး အသေးစားဆန်တာကို ကြိုက် နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းမဟုတ်သလို ကား‌တွေကို ပြင်ရဆင် ရတာ ပိုကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း သတင်းကောင်း တစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ‌ဖြစ်ဖြစ် အခု အခြေအနေတွေကြောင့် လာမယ့် ဈေးကွက်တွေထဲမှာ Toyota GR ( Gazoo Racing ) Yaris အမျိုးအစားကိုတော့ မမြင်တွေ့ရမှာသေချာနေပါပြီ။ အဆိုပါ ကား ကတော့ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂,၈၂၂ ပေါင် ပမာဏသာ ရှိပြီး ပေါ့ပါးတဲ့အပြင် စွမ်းဆောင်ရည် အရလည်း 260 hp နဲ့ 265 lb-ft Torque အထိ ရှိထားတာကြောင့် ပုံမှန် ကားတစ်စီးထက်တော့ ပိုတာသေချာပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကို ဈေးကွက်ထဲ ပို့ဆောင်မှုတွေ မသေချာတော့ပေမယ့်လည်း Aftermarket Tuners သမားတွေ အတွက်ကတော့ ပြင်စရာ ဆင်စရာ တွေ ဆက်လက် ရှိနေဆဲပါပဲ။
အခု ဆိုရင်လည်း ဂျာမနီ နိုင်ငံက Tuning Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DTE System ဟာဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ အဆိုပါ ကားကို သာမန် စွမ်းဆောင်ရည်ကနေ 300 hp အထိရအောင် ပြင်ဆင် လိုက်နိုင်ပြီလို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ DTE Systems ရဲ့ အခုလိုလုပ်ဆောင် မှုမှာ အဓိက အရေးပါ ခဲ့တာ ကတော့ ECU ဆီက Power ကို Unlock လုပ်ခဲ့တဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့အဆိုပါ ကားမှာ Turbocharged Three-Cylinder Engine အတွက် ရှိထားပြီးသား Paramerters ကို Turbos တွေကို Boost မြှင့်တင်ကာ Fuel Richer ကို မောင်းနှင် စေတဲ့ စနစ် အသုံး ပြုခဲ့ပုံ ရပြီး အဲ့ဒီကမှ တစ်ဆင့် Engine Mapping နဲ့ ချိတ် ဆက် သွားခဲ့တဲ့ အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် DTE Systems အနေနဲ့ ခရီးမိုင် အပိုတွေအထိ စွမ်းဆောင်နိုင်အောင် PowerControl X Mobile App နဲ့ တွဲဖက်ကာမတူညီတဲ့ Tunes ၃ ခု အကြားမှာ ယာဉ်မောင်းသူ အနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေး ချယ် မောင်းနှင်နိုင်အောင် ဖန်တီး ပေးထားလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Mode ၃ ခုကတော့ Efficiency ဆိုတဲ့ ဆီစား သက်သာမယ့် စနစ် ၊ Dynamic ဆိုတဲ့ စနစ်နဲ့ Sport Mode တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ သာမန် အလုပ်သွားရင် မောင်းနှင် တာတို့ Grocery Store လောက်ကို မောင်းသွားတာ လောက်မှာ အရမ်းကြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းတဲ့ အမြန်နှုန်း ရှိ မနေ အောင်လို့ ဖန်တီး ပေးထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုလိုမျိုး App နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်လည်း Tuning House ရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် Software တွေနဲ့ပါ ချိတ် ဆက်သိရှိနေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hot Hatch ကိုမှ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ကြိုက်နှစ်သက် ကြတဲ့ သူတွေ အဖို့ကိုတော့ DTE Systems အနေနဲ့ GR Yaris အတွက် သီးသန့် ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ PedalBox Kit ဆိုတာ လည်းရှိပါသေးတယ်။ အဆိုပါ Kit မှာ ဆိုရင် Drive-By-Wire ဆိုတဲ့စနစ် တစ်ခုလည်း ပါရှိ သေးပြီး အဆိုပါစနစ်အရ ယာဉ်မောင်း ဟာ Throttle Response ကို သူတို့ရဲ့ စိတ်ကြိုက် အဖြစ် ချိန်ညှိပြီး မောင်းနှင် နိုင်အောင်လည်း စီမံ ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား သော Tuning Companies တွေ အတော် များများ ကတော့ DTE ကို အခြေခံပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်လာကြတာ တွေ့ရသလို အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတော့ UK အခြေစိုက် Tuning House ဖြစ်တဲ့ Litchfield လည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ Litchfield အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ထား တာကတော့ 300 hp လောက် အထိကို စွမ်းဆောင် နိုင်ဖို့ ဖြစိပြီး ယခင် ပုံမှန်ကားရဲ့ WRC Stock Ride Height အမြင့်ထက် ပိုနိမ့်တဲ့ Suspension Package တစ်ခု ကိုလည်း ဖန်တီး နိုင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ဥရောပ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး Toyota ရဲ့ သေးငယ်လှတဲ့ စီးပွားဖြစ် မြန်နှုန်းမြှင့် ကား တစ်စီး ကို အရေးပေးပြီး ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့ရလို့ စိတ်လှုပ် ရှားစရာလည်း ကောင်းသလို တကယ်ဖြစ်လာ တော့မလား ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာ စောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
The post Kit အသစ်နှင့် အတူ 300 HP ကျော်လောက် အထိကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်သွားတဲ့ Toyota GR Yaris! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T17:30:42+06:30January 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|